အရေးတော်ပုံ မအောင်မချင်း ငါအိမ်မပြန်ဘူး ဆိုပီး ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Shwe Likes
အရေးတော်ပုံ မအောင်မချင်း ငါအိမ်မပြန်ဘူး ဆိုပီး ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
အာဏာ သိမ်းမှုဖြစ်ပွား အပြီး အနုပညာ ရှင်တွေများ စွာဟာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည် ပြီး နွေဦးတော်လှ န်ရေးမှာ တက်တ က်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ အမှန်တ ရားဘက်ကနေ ရပ်တ ည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရပြီး ရှောင်တိမ်းနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်ေ တွလ ည်းရှိသလို ဖမ်းဆီးထိ န်းသိမ်းခံထား ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ လည်းရှိကြ ပါတယ်။
၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့် ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်ေ တွအနေနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအေ နတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Speak out မလုပ်တော့ဘဲ ခံဝန်က တိထိုးရင် ဖွင့်ထားတဲအမှုကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းေ ပးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ပျံ့နှံ့လာနေခဲ့ ပါတယ်။
ရဲရဲရင့်ရင့် နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့သရုပ်ေ ဆာင်ပိုင်ဖြိုးသု ကတော့ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွ င့်ခံထားရ တာကြောင့် ဘေးလွတ်ရာ မှာရှောင်တိမ်းေ နခဲ့ပါတယ်။ ယခုမှာေ တာ့ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ခံဝန်ကတိ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သား သားပြောဆိုလာခဲ့ ပါတယ်။
သူမကတော့ သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်အ ကပ်မခံနိုင်ဘဲ အသက်ပေးသွား သူတွေ၊ထောင်ကျ သွားသူတွေေြ ကာင့် ခံဝန်ကတိထိုးမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယခုအချိ န်ထိ အမှန်တရားဘက်ကနေ မားမားမတ်မ တ်ရပ်တည်နေပြီး ခံယူချက်၊ဆုံးဖြတ် ချက်ပြတ်သားတဲ့ သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ပြည်သူတွေက ချီးကျူးလေးစားနေ ကြပါတယ်။
သူမ ကတော့ ” ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးခဲ့မိလို့ မှားသွားပါတယ်…လို့ခံဝန်လေး ထိုးပြီး အိမ်မှာေ အးဆေးပြန်နေရမ ယ်တဲ့လား….မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်တဲ့လား…. အလုပ်တွေပြန် လုပ်ရမယ် တဲ့လား….တချို့တွေအသ က်တွေပေးသွားကြပြီ… တချို့တွေ ထောင်ထဲေ ရာက်ကုန်ကြပြီ….
တချိူ့တွေ အားလုံး ကိုပစ်ချထားခဲ့ပြီးလက်နက်ေ တွကိုင်နေကြရပြီ….သူတို့တွေအိ မ်ပြန်လို့မရကြတော့ဘူး…မိသားစုနဲ့လည်း ကွဲကွာကုန်ကြပြီ သူတို့ချစ်တဲ့ အလုပ်‌တွေ လည်းလုပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး အဲဒီ့လူတွေကိုငါရှက်တယ် အဖြစ်မရှိသူဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့တင်ငါ့အတွ က်လုံလောက်ပါပြီ…သစ္စာဖောက်ဆို တဲ့တံဆိပ်တော့အ ကပ်မခံပါရစေနဲ့ အရေးတော်ပုံမအော င်မချင်းငါအိမ်မပြန် ဘူး “ဆိုပြီး ရေးသား ထားခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာ သိမ္းမႈျဖစ္ပြား အၿပီး အႏုပညာ ရွင္ေတြမ်ား စြာဟာ ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ ရပ္တည္ ၿပီး ေႏြဦးေတာ္လွ န္ေရးမွာ တက္တ က္ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ အမွန္တ ရားဘက္ကေန ရပ္တ ည္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၅၀၅(က)နဲ႕အမႈဖြင့္ခံထားရၿပီး ေရွာင္တိမ္းေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေ တြလ ည္းရွိသလို ဖမ္းဆီးထိ န္းသိမ္းခံထား ရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြ လည္းရွိၾက ပါတယ္။
၅၀၅(က)နဲ႕အမႈဖြင့္ ခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေ တြအေနနဲ႕ လက္ရွိနိုင္ငံေရး အ​ေျခအေ နေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး Speak out မလုပ္ေတာ့ဘဲ ခံဝန္က တိထိုးရင္ ဖြင့္ထားတဲအမႈကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေ ပးမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာ ပ်ံ့ႏွံ႕လာေနခဲ့ ပါတယ္။
ရဲရဲရင့္ရင့္ နဲ႕ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့သ႐ုပ္ေ ဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသု ကေတာ့ ၅၀၅(က)နဲ႕အမႈဖြ င့္ခံထားရ တာေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာ မွာေရွာင္တိမ္းေ နခဲ့ပါတယ္။ ယခုမွာေ တာ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုဟာ ခံဝန္ကတိ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သား သားေျပာဆိုလာခဲ့ ပါတယ္။
သူမကေတာ့ သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့ တံဆိပ္အ ကပ္မခံနိုင္ဘဲ အသက္ေပးသြား သူေတြ၊ေထာင္က် သြားသူေတြေၾ ကာင့္ ခံဝန္ကတိထိုးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ​ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိ န္ထိ အမွန္တရားဘက္ကေန မားမားမတ္မ တ္ရပ္တည္ေနၿပီး ခံယူခ်က္၊ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ျပတ္သားတဲ့ သူမရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ျပည္သူေတြက ခ်ီးက်ဴးေလးစားေန ၾကပါတယ္။
သူမ ကေတာ့ ” ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပးခဲ့မိလို႔ မွားသြားပါတယ္…လို႔ခံဝန္ေလး ထိုးၿပီး အိမ္မွာေ အးေဆးျပန္ေနရမ ယ္တဲ့လား….မိသားစုနဲ ႕ျပန္ေတြ႕ရမယ္တဲ့လား…. အလုပ္ေတြျပန္ လုပ္ရမယ္ တဲ့လား….တခ်ိဳ႕ေတြအသ က္ေတြေပးသြားၾကၿပီ… တခ်ိဳ႕ေတြ ေထာင္ထဲေ ရာက္ကုန္ၾကၿပီ….
တခ်ိဴ႕ေတြ အားလုံး ကိုပစ္ခ်ထားခဲ့ၿပီးလက္နက္ေ တြကိုင္ေနၾကရၿပီ….သူတို႔ေတြအိ မ္ျပန္လို႔မရၾကေတာ့ဘူး…မိသားစုနဲ႕လည္း ကြဲကြာကုန္ၾကၿပီ သူတို႔ခ်စ္တဲ့ အလုပ္‌ေတြ လည္းလုပ္ခြင့္မရၾကေတာ့ဘူး အဲဒီ့လူေတြကိုငါရွက္တယ္ အျဖစ္မရွိသူဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္‌နဲ႕တင္ငါ့အတြ က္လုံေလာက္ပါၿပီ…သစၥာေဖာက္ဆို တဲ့တံဆိပ္ေတာ့အ ကပ္မခံပါရေစနဲ႕ အေရးေတာ္ပုံမေအာ င္မခ်င္းငါအိမ္မျပန္ ဘူး “ဆိုၿပီး ေရးသား ထားခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Andaman Gold နဲ့ တစ်နှစ်စာ စာချုပ်ချုပ်မယ့် ကိစ္စကို ဖျက်သိမ်းလိုက် တဲ့ အဆိုတော်ဖော်ကာ
တောထဲတောင်ထဲ ရောက်နေ ပီ ဆိုတဲ့ လူရွှင်တော် တိုင်းကျော်
စစ်ဘေးသင့် မင်းတပ်မြို့လေးကို ဒုတိယအကြိမ် လိုအပ်တာတွေထပ်မံ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထူးအယ်လင်း